साउनमा दार्‍ही–कपाल नकाट्ने चलन कस्तो लाग्छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः श्रावण २८, २०७६ - साप्ताहिक
साउनमा दार्‍ही–कपाल नकाट्ने चलन कस्तो लाग्छ ?
साउनको महिनामा कृषिप्रधान मुलुकका मानिसले कृषिकार्यमा बढी समय दिनुपर्ने हुँदा दार्‍ही–कपाल नकाट्नु ठीकै हो तर सहरिया र काम नभएकाहरूले पनि नकाट्नु बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तै हो ।
यो चलन होइन, आ–आफ्नो इच्छाको कुरा हो । यसमा यो साउन महिना, त्यो चैत महिना भन्ने हुँदैन । आफ्नो इच्छाले राख्ने र फाल्ने हो । अरूले के भन्लान् भन्नेतिर ध्यान दिनु हुँदैन, किनभने दार्‍ही–कपाल आफ्ना निजी सम्पत्ति हुन् ।
यो चलन कसरी चल्न गयो ? किन यो महिना दार्‍ही–कपाल काट्न हुँदैन भनियो ? भन्ने कुराको धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण नजानी–नबुझी यो प्रश्नको उत्तर दिन कठिन छ । काट्न हुँदैन भन्ने सुनेको हुँ, तर किन हुँदैन ? त्योचाहिँ थाहा भएन ।
यम बी महेश
पहिले–पहिले खेती किसानीमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भएकाले विशेषतः फुर्सद हुँदैनथ्यो, त्यसैले गर्दा यो चलन चलेको हुनसक्छ तर अहिले यो रहर बन्न पुगेजस्तो देखिन्छ ।
साउन महिनामा भगवान् शिवलाई खुसी पार्न कपाल, दार्‍ही, नङ आदि नकाट्ने चलन चलाउन खोजिएको हुनुपर्छ । भगवान शिवको प्यारो महिना साउन भएकाले भक्तहरूले शिवप्रति आस्था जगाउन त्यसो गर्न चाहेको हुनसक्छ ।
मलाई त फिटिक्कै मन परेन । दार्‍ही–कपाल काट्नु पनि शारीरिक सरसफाइभित्रै पर्ने भएकाले यस्तो चलन बन्द गर्नुपर्छ ।
साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ अनि खर्च कटौती गर्न माछामासु नखाने, सोमवार व्रत बस्ने अनि दार्‍ही–कपाल नकाट्ने चलन चलाइएको हुनुपर्छ ।
सायद साउन महिनामा खेतीपातीको व्यस्तता हुने भएकाले काट्न मिल्दैन भनेर धार्मिक कुरा जोडिएको हुनसक्छ । अहिले आएर यो परम्परा बन्यो ।
साउन महिनामा केटीहरू राम्री देखिन मेहन्दी र चुरा लाउँछन् अनि केटाहरू हिरो बन्न कपाल र दार्‍ही पाल्छन् । मलाई चाहिँ यो चलन खासै केही लाग्दैन ।
त्यस्तो केही लाग्दैन, काम नभएर घरमै बस्नेहरूका लागि हो यो साउन महिनामा कपाल र दार्‍ही नकाट्ने चलन । स्कुल, कलेज, अफिस र अन्य काममा जानेहरूले त काट्नैपर्‍यो क्यारे !
राम्रो र सुन्दर देखिनुपर्छ भनेर कम्पनीको हाकिमले फाल्न लगाउनुहुन्छ । दार्‍ही–कपाल नकाट्ने हो भने त आफ्नो जागिर नै धरापमा पर्छ ।
यो चलन सैलुनवालाहरूलाई घाटा गराउने चाला हो ।
चलेको चलनजस्तै लाग्छ । मैले पनि काट्न छोडेको नौ वर्ष भयो । म त सारै शान्त महसुस गर्छु ।
यो पुरानो प्रचलन मलाई त ठीक लाग्दैन । दिनदिनै दार्‍ही र १५–१५ दिनमा कपाल नकाटे ड्युटी नै गर्न पाइँदैन, समस्या छ हजुर ।
यो सबै पैसा बचाउने मेलो हो । मलाई त ठीक लाग्छ यो चलन । सैलुनवालाहरूले चाहिँ यो परम्परा ठीक होइन भन्लान् ।
यो पुरानो चलन हो । काट्नेहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार काटिरहेका हुन्छन् ।
पहिले–पहिले कपाल र दार्‍ही काट्ने सैलुन पनि हुँदैनथ्यो अनि पैसा पनि हुदैनथ्यो त्यसैले बाठा मानिसहरूले साउनमा कपाल र दार्‍ही काट्न हुँदैन भन्ने चलन चलाए ।
शिव भगवान्प्रति आस्था हुनेहरूले काट्दैनन् । ठीकै लाग्छ मलाई यो चलन ।
साउन महिनामा दार्‍ही–कपाल काट्दैनन् भन्ने कुरा मैले त यही साप्ताहिकबाट थाहा पाएँ । अब मैले के भन्नु ?
खै मलाई त त्यस्तो केही पनि थाहा छैन । बजारका सैलुनहरूमा गएर सोधे थाहा होला कि ?
साउनमा दार्‍ही–कपाल काट्नु हुँदैन भन्ने मान्यता भए पनि हिजोआज त सबैले काटेकै देख्छु ।
१५/२० वर्षपहिले साउन महिनामा धेरै काम हुनथ्यो र काटिँदैनथ्यो । अहिले पैसो नै हुँदैन कसरी काट्नु ?
यो चलन राम्रो होइन । यसले सैलुन खोलेर गुजारा चलाउनेहरूलाई घाटा लाग्छ । त्यसैले यो चलन बन्द गर्नुपर्छ ।
ठीकै लाग्छ, यसले त्यस्तो खासै केही फरक पार्दैन ।
प्रकाशित :श्रावण २८, २०७६
सिताराम–कुञ्जनाको ‘सेन्टी भाइरस’ कस्तो चलचित्र हो
प्रचण्डको नातिनी भन्दा गायिका स्मितालाई कस्तो लाग्छ ?
सुटिङ नहुदाँ अनमोल केसीको लाइफस्टाईल कस्तो हुन्छ ?
नोबेल कोरोना महामारी कस्तो छ ?
भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउन के गर्नुपर्ला  ? भाद्र ५, २०७६